१०.३५% आकर्षक ब्याज दिनेगरी कृषि बिकाश बैंकको ऋणपत्र स्वीकृत - Nepal Bizz
काठमाण्डौ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकलाई धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र निश्कासनको स्वीकृति दिएको छ ।
यो बैंकले जारी गर्न लागेको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेहरुका लागि हाल वाणिज्य बैंकहरुले अफर गरेको भन्दा केही बढी ब्याजदर अफर गरिएको छ ।
हाल बजारमा आइरहेका वाणिज्य बैंकका ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले वार्षिक १०.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँछन् । तर, कृषि विकास बैंकको ऋणपत्रमा भने १०.३५ प्रतिशत ब्याज पाइनेछ । बैंकलाई रु. २.५० अर्बको ‘१०.३५% एडीबिएल कृषि बैंक ऋणपत्र-२०८३’ निश्कासनका लागि अनुमति दिइएको हो ।स्वीकृतिसँगै बैंकले रु. १ हजार दरका कुल २५ लाख युनिट ऋणपत्र निश्कासन गर्न खोजेको हो ।
सात वर्षे अवधिको ऋणपत्रमा वार्षिक ३५ प्रतिशत ब्याज पाइने र ब्याजको भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुनेछ ।
कुल निश्कासन हुने कित्तामध्ये पब्लिकका लागि १० लाख र प्राइभेट प्लेसमेन्टका आधारमा १५ लाख कित्ता बिक्री हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र निश्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै ऋणपत्रहरु बजारमा आइरहेका छन् । बजारमा आउने यस्ता ऋणपत्रमध्ये धेरै कम बित्तीय संस्थाको ऋणपत्र मात्र सबै बिक्री हुन सकेका छन् ।
बैंकहरुले दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्ने, तर स्रोत भने अल्पकालीन खालका मात्र आएपछि मिसम्याच हुने गरेको थियो । यसलाई कम गर्न दीर्घकालीन स्रोतको रुपमा ऋणपत्रमा जान नीतिले प्रेरित गरेको हो । कृषि विकास बैंकको ऋणपत्रको निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल एस क्यापिटलले गर्नेछ ।
Posted on २२ भाद्र २०७६, आईतवार १५:२४ Author admin
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूँजी बजारका नियामक निकायहरु धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १० औं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्रीले पूँजी बजारको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालयको मुख नहेरी आफ्नो काम जिम्मेवारी पूर्वक गर्न निर्देशन दिएका हुन्। कार्यक्रममा शुभकामना मन्तब्य दिने अधिकांश शेयर […]